किन ५ महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा आएन बिजुली बस ? - Everest Dainik - News from Nepal
किन ५ महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा आएन बिजुली बस ?
काठमाडौं, चैत २५ । ५ महिनाअघि काठमाडौंको सडकमा गुडाउन ठिक पारिएका बिजुली बस अझै ग्यारेजमा थन्किएका छन्। बस कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ६ गते उद्घाटन गरेपछि भोलिपल्टदेखि नै सडकमा बिजुली बस गुड्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, ५ महिना बितिसक्दा समेत बस नगुड्दा धेरैले बिजुली बस बिर्सिसकेका छन् ।
काठमाडौंमा चलाउन भनेर ल्याइएका ५ वटा बस चिनियाँ विद्युतीय बस निर्माता कम्पनी बीवाईडीको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय नक्सालमा थन्किएका छन् । मापदण्ड विपरीत र प्राविधिक त्रुटी भएको भन्दै सरकारी तवरबाट बिजुली बसहरु सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि बस सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
एसीयाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदान सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालन गर्ने गरी पाँचवटा बस खरिद गरेको थियो । तर लुम्बिनीमा बिजुली बस सञ्चालनको लागि पूर्वाधार तयार नभएसम्म साझा यातायातले काठमाण्डौमा चलाउने गरी निर्णय भएको थियो ।
सञ्चालनमा आउने प्रतिक्षामा बस लामो समयसम्म साझा यातायात समितिको कार्यलय पुल्चोकमा राखिएका थिए । तर लामो समयसम्म पनि चलाउने नचलाउने कुनै टुङ्गो नलागेपछि त्यहाँबाट पनि हटाएर नक्सालमा राखिएको हो ।
‘सरकारी तवरबाटै बिजुलीबस सञ्चालनमा कुनै टुङ्गो लगाउन नसकेपछि हामीले चलाउँछु भनेर भएन’, साझा यातायात सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले भने, ‘हामी त तेस्रो पार्टी पर्यौँ, हामीले किन चलाउन नदिएको भनेर सोध्ने ठाउँ पनि रहेन ।’
सधैंको लागि यी बसहरु काठमाडौंमै चलाउने र लुम्बिनीको लागि नयाँ बसहरु ल्याउनेसम्म पनि कुरा भएका थिए । बिजुलीबस उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारले अर्को वर्ष अर्थात सन् २०२० भित्र काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा बसको २० प्रतिशत बिजुली बस चलाउने घोषणा गरेको थियो । तर, उद्घाटन गरिएका ती ५ बस सञ्चालनमा ल्याउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अहिले यी बस काठमाण्डौमा मात्र होइन नेपालमै चलाउन कठिन भएको देखिन्छ ।
मापदण्डमा नपर्दा बस सञ्चालनमा समस्या
पर्यटन मन्त्रालयले आफूले तोकेका मापदण्डभित्र नपर्दा बिजुली बस सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । बस चिनीयाँ कम्पनीको हुनुपर्ने भनी ठेक्कामा सम्झौता भए पनि भारतीय ‘एसेम्बल’ बस ल्याएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले बस सञ्चालन गर्न दिएको छैन । यसको साथै मन्त्रालयले यी बसमा अरु १७ वटा कमजोरी देखाएको छ ।
‘हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा तोकिएका मापदण्ड भित्र नपरेको भएर हामीले बिजुली बस सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘प्राविधिक त्रुटीहरु देख्दादेख्दै हामी त्यसलाई कसरी स्वीकार्न सक्छौँ ? कि त बसहरु रिप्लेस गर्नुपर्यो । होइन भने कन्ट्र्याक्ट क्यान्सिल हुन्छ र बसहरु लिलाममा बिक्री हुन्छन् ।’
बस रिप्लेसको लागि मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि बीवाईडी कम्पनीले ध्यान नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्ययन नै नगरी बसलाई दोष दिएको कम्पनीको गुनासो
तर नेपालकोतर्फबाट बीवाईडी कम्पनीका प्रतिनिधि साहिल श्रेष्ठ भने जसरी भएपनि बस सञ्चालनमा आउने बताउँछन् । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनी हो । यी बसहरुलाई सञ्चालन नगरेरै यसका कमजोरीहरु विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन’, उनले भने, ‘सुरुमा चलाएर त हेर्नुपर्यो नि । हचुवाको भरमा झिनामसिना कमजोरीहरु देखाएर मापदण्डभित्र परेन भन्न मिल्छ ?’
यस विषयमा अराजक भएर लाग्नुभन्दा समझदारीमा निर्णय गरे बस चाँडै सञ्चालनमा आउने श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तै बीवाईडी कम्पनीकै ब्राण्ड साइमेक्ससँग आबद्ध यमुना श्रेष्ठले सरकारले बीवाईडी बसमा देखाएका प्राविधिक त्रुटीहरु जायज नभएको गुनासो गरे । ‘बसहरुमा कुनै डिफेक्ट छैन । तर नेपालमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएकाले आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूर्ति नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको मात्र हो’, उनले भने ।
वैशाखभित्रै चलाउने मन्त्रीको दावी
काठमाडौंमा बस सञ्चालनको जिम्मा पाएको साझा यातायातका निर्देशक भुषण तुलाधरले सानातिना कमजोरीलाई लिएर बहस खडा गर्नभन्दा पनि निश्चित ट्रायल अवधि तोकेर बस चलाउन दिए हुने बताउँछन् ।
नेपालमा नयाँ प्रविधि भएकाले चलाएपछि मात्र यसका कमी कमजोरी थाहा हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘विद्युतीय बसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको ब्याट्री हो, ब्याट्री राम्रो छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । बसभित्रका आन्तरिक कुराहरु परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बिजुली बस वैशाखभित्रै चलाउने दावी गरेका छन् । यातायात प्राधिकरण बनाएर नयाँ ऐन बमोजिम बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउने उनको तर्क छ । यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने र बस सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । उज्यालोअनलाइनबाट
ट्याग्स: electric bus, Kathmandu